Nepali Rajneeti | तीन करोड चिनियाँले पाएका छैनन् विवाह गर्न केटी !
तीन करोड चिनियाँले पाएका छैनन् विवाह गर्न केटी !
जेठ ३, २०७८ सोमबार २५२ पटक हेरिएको
छोरा र छोरीको जन्ममा यत्रो फरक हुनुले चिनियाँ समाजले अहिले पनि छोरा नै महत्व दिएको देखिन्छ।
हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स अफ टेक्नोलोजीका प्राध्यापक स्टअर्ट जिटेन-बास्टेनले चिनियाँ समाजमा यो समस्या अझै लामो समयसम्म रहने बताए।
गत वर्ष जन्मिएका बच्चाहरूको तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने जब उनीहरू विवाह गर्ने उमेरमा पुग्नेछन् त्यतिबेला ६ लाख केटाहरूले विवाहका लागि केटी पाउने छैनन्।
सिआनको जियाटोङ विश्वविद्यालयका जनसंख्याका प्राध्यापक जियाङ क्वानबाओका अनुसार सन् १९८० देखि २०३० को बीचमा चीनमा छोरीहरूभन्दा झन्डै ४ करोड बढी छोरा जन्मिएका थिए। त्यही भएर अहिले विवाहका लागि केटी नपाउने समस्या भएको हो।
सन् १९७९ मा सुरू भएर २०१६ मा सकिएको चीनको ‘एक बच्चा’ नीतिले पनि छोरीहरू गर्भमै मारिने र छोरामात्रै जन्माउने प्रवृत्तिलाई बढवा दिएको उनले बताए।
चीनको तथ्यांक विभागले अहिले चीनमा एक महिला सरदर १.३ बच्चा जन्माउँछन्। जबकी जनसंख्याको स्थायित्वका लागि त्यो दर २.१ प्रतिशत हुनु पर्छ।
चीनमा निम्न वर्गमा पुरूषहरूले विवाहका लागि केटी नपाउने समस्या बढी झेल्नु परिरहेको छ।